Dowlada Somalia oo beenisay in ay ogeyd wafdigii Kenya ee ka qeyb galay caleemo saarkii… – Hagaag.com
Dowlada Somalia oo beenisay in ay ogeyd wafdigii Kenya ee ka qeyb galay caleemo saarkii…
Wasiirka warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa beeniyay in Dowlada Soomaaliya ay ogeyd in wafdigii Kenya ee ka qeybgalay caleemo-saarkii Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ee Kismaayo.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay war uu sheegay Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo sheegay in wafdigii tagay Kismaayo ee ka socday dowlada Kenya ay halkaas ku tageen ogolaanshaha dowladda Soomaaliya.
“Warka uu sheegay agaasimaha guud meelo badan ayuu taabanayaa, laakiin qodobka ah diyaarad iyo madaxda Kenya ka tirsan kuma xadgudbin Soomaaliya waa war aan waxba ka jirin”.ayuu yiri wasiir Maareeye.
Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in dowlada federalka ay warqad ka soo saartay diyaaradaha ka imanaya Kenya ee tagaya Kismaayo in ay soo maraan Muqdisho.
“Madaxdii diyaaradda saarneyd ma jirin wax oggolaansho ah oo ay ka haysteen Soomaaliya, iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay dalka ku galaan.”ayuu sii raaciyey Wasiirka warfaafinta dowlada federalka Maareeye.
Wafdigii ka socday Kenya ee ka qeybgalay caleema-saarka madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, waxaa hoggaaminayay Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya iyo Senator Yuusuf Xaaji oo laga soo doorto Gaarisa.